War Rasmi Ah: Isku-aadka Wareegga Afraad Ee FA Cup Oo Lasoo Saaray, Chelsea Oo Ku Aaday Koox Yar
[ May 19, 2022 ] Da’yarka Arsenal ee Lokonga oo dhiirigelin ka helay De Bruyne, Lukaku	Wararka Ciyaaraha
[ May 19, 2022 ] Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Fluminense Andre Trindade oo xiiso ka helaya Liverpool, Barcelona	Wararka Ciyaaraha
[ May 19, 2022 ] PSG oo Mane ku qancisay inuu kasoo dhaqaaqo Kooxda Liverpool	Wararka Ciyaaraha
HomeWararka CiyaarahaWar Rasmi Ah: Isku-aadka Wareegga Afraad Ee FA Cup Oo lasoo Saaray, Chelsea oo ku aaday koox yar
January 10, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalada Kale, Warka Xiisaha Leh 0
Isku-aadka wareegga afraad ee tartanka FA Cup ayaa lasoo saaray oo ay ku dagaallami doonaan 32 kooxood oo ka kooban naadiyada Premier League iyo kuwa heerarka hoose. Afar kooxood oo kaliya ayaa ka hadhay naadiyadii Premier League ee ku jiray tartanka FA Cup.
Burnley oo ay reebtay Huddersfield Town, Newcaslte United oo tartanka ay ka tuurtay Cambridge, Watford oo sababsatay gacanta Leicester City iyo Leeds United oo tartanka macasalaamaysay markii ay West Ham garaacday.
Inta kale ee kooxaha Premier League ayaa iska xaadiriyey wareegga afraad marka laga reebo Manchester United iyo Aston Villa oo Axadda wada ciyaaraya iyo kulanka socda ee Arsenal oo natiijadiisu aanay soo bixin.
Chelsea iyo Manchester City ayaa Jimcihii iyo Sabtidii durduro kusoo dhaafay Chesterfield iyo Swindon, halka Brentford ay soo jiidhay Port Vale, isla markaana ay Wolves saddex gool u dhiibtay Sheffield United. Naadiga ku dhibaatoonaya Premier League ee Norwich ayaa heshay koox kasii liidata oo ah Charlton oo ay gool madi ah kaga soo badisay si ay ugu gudubto wareegga saddexaad.
Crystal Palace, Tottenham iyo Liverpool ayaa iyaguna isasoo xaadiriyey, sidoo kalena Brighton, Everton iyo Southampton ayaa iyaguna boosaskooda diyaarsaday.
Kulamada wareegga afraad ee FA Cup ayaa noqon doona hal lug oo kaliya, waxaana la ciyaari doonaa marka ay taariikhdu tahay February 5 iyo February 6.
Da’yarka Arsenal ee Lokonga oo dhiirigelin ka helay De Bruyne, Lukaku
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Fluminense Andre Trindade oo xiiso ka helaya Liverpool, Barcelona
PSG oo Mane ku qancisay inuu kasoo dhaqaaqo Kooxda Liverpool